Qodobo laga soo saaray heshiis dhex maray baarlamaanada Hir-Shabeelle iyo Galmudug – Soomaali 24 Media Network
Qodobo laga soo saaray heshiis dhex maray baarlamaanada Hir-Shabeelle iyo Galmudug
Posted on July 1, 2020 Leave a Comment on Qodobo laga soo saaray heshiis dhex maray baarlamaanada Hir-Shabeelle iyo Galmudug
Guddoomiyeyaasha baarlamaanada Galmudug iyo Hir-shabelle oo Muqdisho ku kulmay ayaa wada gaaray heshiis xiriir iskaashi ah, kaas oo qodobo ay kasoo baxeen.
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur “Gacal” ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dhigiisa Hir-shabelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed ay is xog wareysi dheer kadib ku heshiiyeen shan qodob, kuwaas oo kala ah.
In labada baarlamaan ee Galmudug iyo Hir-shabelle ay yeeshaan iskaashi iyo wada shaqeyn joogto ah.
In si wadajir ah loogu hambalyeeyo lana bogaadiyo shacabka iyo maamulka gobalka Benaadir oo helay xuquuqdii ay ku lahaayeen matalaada Aqalka Sare ee barlamaanka federaalka, loona mahad-celiyo Golaha Shacabka iyo Madaxweynaha federaalka oo u galay dadaal dheer, kana mira dhaliyey.
In si wadajir ah loo bogaadiyo gacanna lagu siiyo golayaasha federaalka iyo guddiga doorashooyinka Qaranka, dadaalka ay ugu jiraan sidii dadka Soomaaliyeed ay usoo dooran lahaayeen wakiilladooda ku matalaya labada Aqal ee barlamaanka federaalka, loogana gudbi lahaa doorasho dadban oo dambe.
In wadajir looga qeyb-galo shirka Madaxweyne Farmaajo ku casuumay Madaxweyne-yaasha dawlad gobaleedyada 5-ta illaa 8-da bishan Luulyo, kana soo baxaan go’aanno dadka iyo dalka Soomaalyeed u aayaan.
In lasii wado kulamadii iyo shirarkii is kaashi ee golayaasha xeer-dejinta federaalka iyo dawlad gobaleedyada, lana fuliyo heshiisyadii horay loo wada gaaray.
Heshiiskan oo ah kii ugu horeeyay ee dhex mara labada guddoon ee baarlamaanada Hir-Shabeelle iyo Galmudug ayaa ku soo beegmaya xilli ay Muqdisho markii ugu horeysay metelaad 13 xubnood ah ka heshay golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka dalka, taas oo bilaawgii todobaadkan ay ansixiyeen xildhibanada golaha shacabka Soomaaliya.
← Khudbad: Deni oo si rasmi ah u qaadacay shirkii uu iclaamiyey Farmaajo
Dibadbaxyo dib uga qarxay dalka Sudan →